By administrator on	 March 2, 2021 देश, धर्मसंस्कृति, फोटो फिचर, स्थानीय, स्थानीय तह
गैँडाकोट । गैँडाकोटमा रहेको धार्मिक आस्था बोकेको मौलाकालिका मन्दिरको फेदीबाट मन्दिर जानका लागि करिब २ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । २ किलोमिटरको पैदल मार्गमा सिँढी निर्माण गरिएको छ । सोहि सिँढीमार्गको दायाँबायाँ ठूलासाना शिला देख्न सकिन्छ । आजभोलि केही मूर्तिकारहरुको दैनिकी यहाँ रहेका ढुङगालाई जीवन र आकार दिन व्यस्त देखिन्छ । धुलो र दुःखकष्ट नभनी उनीहरु यसैमा रमाउँछन्, यसले मौलाकालिका मन्दिरको धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय पाटोमा पनि सहयोग पुग्ने उनीहरुको विश्वास छ । मौलाकालिका मन्दिरको सिँढीमार्गमा शिवलिङ्ग बनाउन व्यस्त रहनुभएका नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान मूर्तिकला विभाग प्रमुख लालकाजी लामाले यसले मन्दिर जाने पैदल यात्रुलाई थकान नहुने र मन्दिरका महत्त्व अझै बढ्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – बाल्यकालदेखि नै मूर्ति बनाउँदै आएको छु । यस काममा कहिल्यै दुःख महसुस भएन व्यावसायिक र सामाजिक दुबै पाटोबाट मूर्ति निर्माण गर्दा सुखको अनुभुति गर्छु । यसरी अहिले मूर्ति बनाउनु भनेको कलाकृतिको संरक्षण गर्नु पनि हो । हामीले यसरी काम नगरे कलाकृति मरेर जान्छ, नयाँ कलाकृति बनेन भनेपछि आउने पिँढीले कलाकृति देख्न पाउने छैनन्, यो समाजसँग जोडिने कुरा भएकाले पनि हामीले मेहेनत गरिरहेका छौं । यसले मौलिकता जोगाउने काम त गर्छ नै । साथै आर्थिक गतिविधि र पर्यटकीय गतिविधि बढाउन पनि मद्दत गर्छ ।
मूर्तिकार लक्ष्मण भुजेल अमूर्त शैलीमा मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ सृष्टि रचनाको प्रतीकका रुपमा आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । अन्य क्षेत्रमा आयोजना गरिएका कार्यक्रमभन्दा मौलाकालिका मन्दिरमा फरक तरिकाले गरिएकाले यसको महत्त्व अझै बढी हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । धार्मिक आस्थालाई जीवन्त दिने तवरका विभिन्न मूर्तिहरु निर्माण भइरहेका छन् ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर काम भइरहेको छ । आस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबैले मूर्ति निर्माण गरिरहनुभएको छ । मूर्त र अमूर्त रुपमा हामी धार्मिक आस्थासँग जोडिएर मूर्तिहरु निर्माण गरिरहेका छौँ । मान्छेलाई जीवनप्रतिको आशा जगाउने, आस्था झल्काउने काम गर्छ ।
मूर्र्तिकार राजन काफ्ले रौतहटबाट आएर अहिले मौलाकालिका मन्दिर जाने पैदल मार्गका दायाँबायाँ रहेका शिलामा आकार दिन व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँ मूर्ति निर्माण गर्दा खुशी हुने उहाँले भवन बन्नु, स्कुल बन्नु मात्रै विकास नभएर संस्कृति परम्परा, पौराणिक र धार्मिक सम्पदाको पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने चेतना विकास हुनु सबैभन्दा राम्रो पक्ष रहेको बताउनुहुन्छ । यसले धार्मिक आस्था बोक्ने हुनाले पनि पैदल यात्री र सरोकारवालाले यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – सार्वजनिक स्थलमा यसरी मूर्ति निर्माण गर्नु राम्रो पक्ष हो धार्मिक रुपमा अझै मन्दिरको महत्त्व बढाउँछ तर कतिपय अवस्थामा केही व्यक्तिले यसको महत्त्व नबुझ्ने र फोटो खिच्ने नाममा यसैमाथि टेक्ने, एकअर्काका नाम लेख्ने र कुरुप बनाउने काम चाहि गर्नुहुँदैन । वर्र्षौंपछि हावा, पानी र विभिन्न कारणले खिइएर अर्को आकार दिएपनि कृत्रिम रुपमा भने यसलाई बिगार्नुहुँदैन भन्ने मान्यता छ ।
मूर्तिकार सरोज श्रेष्ठ काठमाडौंबाट आएर अहिले मौलाकालिका पैदल मार्गमा रहेका दायाँबायाँका शिलामा त्यो पनि शिव भगवान्को मूर्ति बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ । ५ फिटको शिवको शिर बनाइरहनुभएका उहाँले मौलाकालिका मन्दिर धार्मिक आस्था बोकेको मन्दिर भएकाले पनि यसले मन्दिरको महत्त्व अझै झल्काउने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – ढुङगालाई देवता बनाउनुको आनन्द बैग्लै छ । हामी ढुङ्गामा केही मात्रा भएपनि देवताको आकार देख्दा पुज्छौँ । हाम्रो आस्था र विश्वास छ । झनै यसमा आकार दिएर काम गर्न पाउँदा त्यो पनि धार्मिक क्षेत्रमा धेरै खुसी लागेको छ । यो कर्मप्रति सन्तृष्ट छु म । मलाई यहाँको महत्त्व नै बेग्लै लाग्छ ।
आस्था थिमअन्तर्गत यहाँ निर्माण भइरहेका मूर्तिहरुका मूर्तिकारहरुमा एक मात्र महिला मूर्तिकारका रुपमा मूर्तिकार अनमारी तामाङ हुनुहुन्छ । भगवान् विष्णुको अवतारसँगै धैर्यसाथ काम गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने उहाँ कछुवाको मूर्ति बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँले अहिले मन्दिर आउनेजाने व्यक्तिको थरिथरिका मूर्ति देख्दा रमाउँदै मन्दिरका उकाली चढ्ने र ओराली भरेको महसुस गरेको बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ –हामी मूर्ति बनाउँदै गर्दा मन्दिर जानेआउने व्यक्ति मुहारमा एक प्रकारको खुसी देख्छौँ ।मूर्तिका बारेमा सोध्नुहुन्छ । रमाइलो मान्दै हिँड्नुहुन्छ । त्यो देख्दा पनि छुट्टै खुसी लाग्छ । मैले कछुवाको मूर्ति बनाएको छु । कसैले यसलाई भगवान्को विष्णुको अवतार मान्न सक्नुहुन्छ अनि कसैले धैर्यको प्रतीकका रुपमा लिनुहुन्छ । हेर्ने दर्शकले आपूm अनुसार बुझ्ने र केही स्पेश राखेर मूर्ति बनाउँदा खुसी लाग्छ ।
चितवनका मूर्तिकार राजेश बरालले शिवलिङ्ग र नागको मूर्ति बनाइरहनुभएको छ । आफ्नै गाउँठाउँ र आपूm बच्चैदेखि आउने गरेको मन्दिरमा यसरी आफैले मूर्ति बनाउन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।२ दिन अध्ययन गरेर मूर्ति बनाउन सुरु गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – गणेश मन्दिर, कृष्ण मन्दिर कट्नेबित्तकै यसरी मूर्तिहरु देख्दा दर्शनार्थीलाई आनन्द आउँछ । यो ठाउँको महत्त्व अझै धेरै छ यसरी मूर्ति बनाइरहँदा अझ महत्त्व बढ्छ । आफ्नै ठाउँमा बनाउँदा खुसी त कति हो कति लागेको छ नि ।
यस्तै धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिरका अध्यक्ष शालिग्राम सापकोटाले मौलाकालिका मन्दिर व्यवस्थापन समिति, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र गैँडाकोट नगरपालिका सबैको सहकार्यमा मूर्ति निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यसरी मूर्ति निर्माण हँुदा यसको धार्मिक, पौराणिक र पर्यटकीय विकासमा प्रवद्र्धन गर्ने सापकोटाको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – यसरी निर्माण हुँदा मन्दिरको महत्त्व पनि बढछ । यसले धार्मिक र सांस्कृतिक पाटोमा महत्त्व दर्शाउँछ । यो पहिलो वर्ष हो आगामी वर्ष पनि यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ । यसको संरक्षणको पाटो पनि छ । हामीले कसरी संरक्षण गर्ने महत्त्व बुझाउने पनि गर्छौंरेखदेखका लागि पनि मान्छे खटाउछौँ । यसमा त लगानी धेरै छ । अहिलेको वर्ष मात्रै १५÷१७ लाख छ । अब सबैको सहयोगले मन्दिरको महत्त्व झल्काउँछ । हामी मन्दिरको महत्त्व बुझाउन पक्कै पनि अग्रसर भएर काम गरिरहेका छौ र पछि पनि गर्नेछौँ ।
अहिले मन्दिर पुग्ने सिँढीमार्गको दायाँबायाँरहेका ठूलासाना शिलामा नाग, शिवलिङ्ग, गणेश, शिव, कछुवा, काली, वनकालीलगायतजीवन र जगत्सँग जोडिएका मूर्त र अमूर्त मूर्तिहरु बनिरहेका छन् । यसरी बनिरहेका मूर्तिले धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढ्दै गएको मौलाकालिका मन्दिरमा थप आगन्तुकहरु भित्राउनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने जनाइएको छ ।
के भन्छन् त भक्तजन?
गैँडाकोटका केशवहरि पौडेलले देशका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा यसरी मूर्ति निर्माण भइरहेको समयमा मौलाकालिका मन्दिरमा पनि निर्माण हुदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।
दोस्रो पटक बीरगन्जबाट मन्दिर दर्शनका लागि आउनुभएका शारदा पराजुलीले अहिले आउँदा बाटामा मूर्ति बनेको देख्दा खुसी लागेको बताउनुभयो । अब आउँदा झनै रमाइलो हुने र थकान पनि महसुस नहुने बताउनुभयो ।
धादिङबाट सामाजिक विषयअन्तर्गत विद्यार्थीलाई धार्मिक महत्त्व बुझाउन मौलाकालिका मन्दिरको दर्शनका लागि आउनुभएका दर्शनार्थी शिक्षक उद्धव नेपालले अहिले बनिरहेको मूर्तिले महत्त्व अझै बढाएको बताउनुभयो । मन्दिरलाई सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पनि अब पहल गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
महेन्द्रोदय मावि धादिङबाट ८० जना विद्यार्थीसहित आउनुभएका अर्का शिक्षक कृष्णमान श्रेष्ठले बाटामा बनिरहेका धार्मिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक पक्षको उजागर गर्ने र कला तथा सीपको पहिचान दिने भएकाले निकै राम्रो लागेको बताउनुभयो ।
गैँडाकोट ५ की मनु ढकाल आपूmले थाहा पाउँदादेखि नै मन्दिर गएको सम्झनुहुन्छ । उहाँ मन्दिरको पैदल मार्गमा बनेका मूर्तिले मन्दिरको महत्त्व झल्काउन अझै बढी भूमिका खेल्ने बताउनुहुन्छ ।
माडीको अयोध्यापुरीमा राख्ने राम सीता मुर्ति देवघाटमा, सांसद देखि प्रशासनबाट स्वागत
काष्ठ मन्दिरको नगरप्रमुख पौडेलद्धारा उद्घाटन, मुकुन्दसेन दरवारको उत्खनन् सहित विकासमा जोड
जलबीरे पुल संचालनको तयारीमा
नेकपा माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश सदस्य दिपक कोइराला । २०७८ वैशाख ०८
April 21, 2021 | 11 min 10 secs
विजय खबर २०७८ वैशाख ०८ विहान
April 21, 2021 | 22 min 12 secs
राम सीता लक्ष्मण र हनुमानका मुर्तिहरु कसरी ल्याइदै छ त ? अयोध्याधाम व्यवस्थापन समितिका संयोजक तीर्थराज भुषाल ।
April 20, 2021 | 13 min 57 secs
विजय खबर २०७८ बैशाख ६ गते बेलुका
April 19, 2021 | 24 min 40 secs
अन्य समयको तुलनामा यतिवेला मौसम धुम्म छ । तपाईंले आँखा पोलिरहेको महसुस गर्नुभएको छ होला…
लकडाउनको एक वर्ष : कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै
हाम्रा सबै कामहरूको एउटै सार सुरक्षित खानेपानी
मोतिचन्द्र चालिसे अध्यक्ष, जलुके खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था जलुके खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले…
‘क्यान्सरले मर्छु होला भन्ठान्याथेँ तर आज बाँच्न सिकाइरहेको छु’
डोलराज रानाभाट हर्कपुर, गैँडाकोट । किताव एक त्यस्तो महत्वपूर्ण माध्यम हो जहाँ आफ्नो कुरा राख्न…
अब युवाका हातमा सत्ता सुम्पनुपर्छ
जनक सापकोटा मेहनत र संघर्ष बिना सफलताका खुड्किलाहरु उक्लन सकिँदैन । कुनै न कुनै परिवर्तन…
गैँडाकोटमा मकै प्रवद्र्धनका लागि सम्झौता
प्रेम क्षेत्री गैँडाकोट । गैँडाकोटमा मकै प्रवद्र्धनका लागि गैँडाकोट नगरपालिकाले करिब ३६ लाख उपलब्ध गराउने…
माटो परीक्षणबारे किसान अनभिज्ञ
गोमा शर्मा गैँडाकोट । माटोको उर्वराशक्ति बढाउनका लागि माटो परीक्षण गर्नुपर्ने भएपनि यसतर्फ ध्यान नदिँदा…
गैँडाकोट हर्कपुरमा ‘सीजी उन्नति कल्चरल भिलेज’ स्थापना(तस्वीरसहित)
गैँडाकोट । चौधरी ग्रुप (सीजी) अन्तर्गतको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने निकाय चौधरी फाउण्डेसनले नवलपुरको गैँडाकोट…
निष्ठाको राजनीतिबारे अन्तरक्रिया
प्रेम क्षेत्री गैँडाकोट । निष्ठाको राजनीति पुस्तकबारे शनिबार गैँडाकोटमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । भरतपुर २…
धनराज गिरी कविता गाता नाचे मानिस आज आवरणमा संसार हो बाहिरी । सारा मख्ख यहाँ…
बैशाख संक्रान्ति कसलाई राम्रो, कसलाई नराम्रो ?
विजय एफएम । चैत्र १८ गते । गैँडाकोट । ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुनै पनि ग्रह…
गैँडाकोटमा लक्ष्मीबेङ्कटेश भगवानको पञ्चदिवसीय ब्रम्होत्सव सुरु
गैँडाकोट, ३ चैत्र । श्रीमद्रामानुज वेदविद्याश्रम गैँडाकोट १ मा श्री लक्ष्मीबेङ्कटेश भगवानको पञ्च दिवसीय ब्रम्होत्सव…